OED COVID-19 | Racfaanada iyo Dhageysiyada
Ka racfaan qaadashada Go'aanka Maamulka
Waqti walba waxaan yareynay ama diidnay faa’idooyinkaaga, waxaan kuu soo dirnay go’aanka maamulka. Haddii aadan ku raacin go’aanka maamulka, waxaad uga racfaan qaadan kartaa dhageysi. Badroonigaaga sidoo kale wuu ka racfaan qaadan karaa go'aanka maamulka.
Inta badan go’aamada laga soo diray Waaxda Shaqada waxaa ku jiro tilmaamo oo xareynta racfaan iyo dhammaadka waqtiga racfaanka si markaas si waqtiyeysan loogu codsado dhageysi. Haddii aad ku guuldareysatid inaad xareysid racfaan waqtiyeysan waxay kaa illaalin kartaa in Go’aanka Maamulka asalka ahaa la badelo.
Qaabka ugu wanaagsan oo loo codsado dhageysi waa onleenka https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/Appeals-Process.aspx. Sidoo kale waxaad ku codsan kartaa dhageysi boosto ahaan, fakis, ama haddii aad u baahantahay caawin dheeraad ah, oo taleefon ahaan. Waxaan ku siineynaa fasiraad luuqad iyo hoyga curyaanka markii la codsado, oo bilaash kugu ah.
Markii aad ku soo dirtid codsi qoran dhinaca Adeega Boostada Mareykanka, gaar ahaan xaalada aad codsaneysid oo ku dar:
Lambarkaaga Amniga Bulshada ama Lambarka Aqoonsiga Macmiilkaaga (CID),
Lambarka go’aanka maamulka, iyo
Taariiqda soo dirista ee go’aanka maamulka aad ka racfaan qaadaneysid.
Fadlan ogeysii labadaba Dhageysiyada Maamulka Xafiiska (OAH) iyo Xarunta UI haddii ciwaankaaga ama lambarka taleefonkaaga isbadelo kadib markii aad codsatid dhageysi. Warbixin badan oo ku saabsan dhageysiyada iyo nidaamka racfaanada waxaa laga heli karaa OAH.
Inta lagu jiro nidaamka racfaanka, sii wad inaad xareysid faa’idooyinka isbuuclaha. Haddii aadan ku sheegin isbuuc walba si waqtiyeysan iyada oo racfaankaaga la sugayo, laguma siinayo sibuucyadaas haddii racfaanka lagu go’aansado dhinacaaga.